AHS Star Taissa Farmiga Ga-amalite na 'Conjuring' Spin Off 'Nun' na Aha Mbụ
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ AHS Star Taissa Farmiga Ga-amalite na 'Conjuring' Spin Off 'Nun' na Aha Mbụ
edere ya admin April 24, 2017
Nnukwu akụkọ na-apụta n'ụjọ Hollywood n'ụtụtụ a ka New Line kwupụtara nke ahụ American Horror Story na Girlsmụ agbọghọ Ikpeazụ kpakpando Taissa Farmiga ka egosiputara n'egosiputa nwata nwanyi nno na olile anya nke oma Nhazi ndapụta, The Nun. Akụkọ a na-akọ naanị site na n'obi imecha, na-abịa dị ka ihe ịtụnanya dị na Mọnde a-Mọnde ', dịka m doro anya na ọkụ ala mmụọ ahụghị onye a. Agbanyeghị, ọ na - eme ka uche zuru oke dịka Farmigas 'abụghị ndị bịara abịa Nkwado eluigwe na ala.
Akụkọ ahụ na-ewute dị ka nwanne nwanyị nke tọrọ Taissa, Vera Farmiga nwere ọhụụ na James Wan Nhazi ihe nkiri dika uche Lorraine Warren tinyere Patrick Wilson dika Ed Warren. Onye na-eweta egwu na-abịanụ James Wan n'onwe ya, gosipụtara obi ụtọ ya maka inwe Taissa sonye na ndị nkedo site na Twitter:
Welcome @taissafarmiga nye ezinụlọ! Ebumnuche bụ ịrụ ọrụ na Farmigas niile. @VeraFarmiga #Maka #ihe banyere https://t.co/ZlWAKbKq47
- James Wan (@nekwu_nkechi) April 24, 2017
Ihe nkiri ahụ nke Corin Hardy (The Hallow) duziri wee dezie ya na Annabelle na Stephen King IT onye edemede bụ Gary Dauberman tinyere James Wan onye na-anọdụkwa na oche onye na-emepụta ihe na Peter Safran, bụ agwa nke abụọ site na The Conjuring fim iji nweta nnukwu mmefu ego. Ọ naghị esikwa ike ịhụ ihe kpatara ya. Nun onye pụtara na The Conjuring 2 bụ 100% ihe kachasị njọ banyere ihe nkiri ahụ. Ọ bụ ezie na ngosipụta ndị ahụ dị mkpirikpi, o zuru ezu ịhapụ ụlọ ụka Katọlik ebe niile, ma nye naanị ndị na-aga ụlọ akwụkwọ ndị nọn ahụ siri ike, nrọ ọjọọ maka izu na njedebe.
Kedu ihe ị chere banyere Taissa Farmiga na-ewere ọnọdụ egwu a n'oge a? Offda n'okpuru, ma guzoro dị ka ndị ọzọ The Nun akụkọ na-apụta!
Ebe e si nweta foto: ComingSoon.net
conjuring spinoffcorin hardyGary DaubermanIhe nkiri nkiri Horroregwu egwuJames WanTaissa FarmigaNjikọThe Nunihe nkiri nọnna-abịa egwu nkiri
Ọnụ ọgụgụ 'Nwanne Nwanyị Funko' nke Funko Na-abịa Oge Ezumike A
"20 Seconds to Live": Ndị okike na-agba ajụjụ ọnụ Ben Rock na Bob DeRosa